Real Madrid Oo Monaco Ula Tagaysa Qorshe Ay Kaga Doonayso Kylian Mbappé Maaha Mid La Diidi Karo – Kooxda.com
Home 2017 May Spain, Wararka Maanta Real Madrid Oo Monaco Ula Tagaysa Qorshe Ay Kaga Doonayso Kylian Mbappé Maaha Mid La Diidi Karo
Real Madrid Oo Monaco Ula Tagaysa Qorshe Ay Kaga Doonayso Kylian Mbappé Maaha Mid La Diidi Karo
May 19, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda Real Madrid ayaa doonaysa in ay xagaaga hesho saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Monaco iyo xulka qaranka France ee Kylian Mbappé.
Wargayska Experrs ayaa sheegaya in kooxda Real Madrid isku diyaarinayso in ay Kooxda Monaco siiso weeraryahanka reer France ee Karem Benzima si ay iyaguna u helaan weeraryahankan da,yarka ah.
Maamulka Kooxda Real Madrid ayaa ka war qaba in qaab ciyaareedka xiddigan reer France ee Kariim Benzima uu hoos u dhac weyn ku yimid xilli ciyaareedkan.
Kooxda Monaco ayaa sheegtay in ayna xiddigan ku fasixi doonin wax ka yar 100 Milyan Laakiin Real Madrid ayaa diyaarinaysa in ay heshiis isku badalasho ah la samayso kooxda Monaco si ay u hehso da,yarka Kylian Mbappé.
Xiddigan ayaa soo jiitay indhaha kooxo badan oo reer yurub ah oo ay ka mid yihiin kooxaha Barcelona,Real Madrid,Man United, Man City ,Arsenal iyo waliba Liverpool kuwaas oo dhamaantood doonayay adeega xiddigan.
Kylian Mbappé ayaa xilli ciyaareedkan soo bandhigay qaab ciyaareed aad u fiican isaga oo kooxdiisa ka caawiyay hanashada horyaalka dalka France sidoo kale geeyay semi-finalka tartanka champions league.